मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २० असार २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २० असार २०७५)
on: २० असार २०७५, बुधबार ०८:४० लगानी
मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २० असार २०७५)
कम्पनीले गत पुस २२ गते साधारणसभा गरेको थियो । बैङ्कले आफ्ना लगानीकर्ताका लागि ३१ दशमलव ४७ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव ६६ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ । उक्त बोनस शेयरपछि कम्पनीको पूँजी ५० करोड पुगेको छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार एकदेखि तीन जिल्ले कार्यक्षेत्र रहेको विकास बैङ्कको पूँजी ५० करोड हुनुपर्नेछ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आवको तेस्रोे त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आव २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
बैङ्कको खुद नाफा ७ करोड २८ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा करीब १२ प्रतिशत कमी हो । यसै समयमा पूँजी ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५० करोड पुगेको छ ।
पूँजी वृद्धि र खुद नाफामा कमी आएसँगै बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी भने घट्न पुगेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी ३३ प्रतिशतले घटेर रू. १९ दशमलव ४४ पुगेको छ ।
निक्षेप २७ प्रतिशतले र कर्जा २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ । बैङ्कले तेस्रोे त्रैमाससम्म ३ अर्ब १७ करोड निक्षेप सङ्कलन गरी २ अर्ब ९३ करोड कर्जा प्रवाह गरेको पाइन्छ ।
बैङ्कको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा रहेको खुद ब्याज आम्दानी ११ प्रतिशतले कम भएको छ । बैङ्कले १२ करोड ८६ लाख खुद ब्याज आम्दानीबापत कमाउन सफल भएको छ । बैङ्कले ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपरेको छ भने जोखीम कोषबाट रकम फिर्ता गरेको छैन ।
त्यस्तै, बैङ्कको सञ्चालन नाफा १२ प्रतिशतले कम भएर ११ करोड ४४ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको कोषको लागत वृद्धि भएको छ । ८ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको कोषको लागत वृद्धि भएर ९ दशमलव ६१ पुगेको छ ।
बैङ्कले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार बैङ्कको प्रतिशेयर नेटवर्थ १३१ दशमलव ८८ रुपैयाँ, ब्याज स्प्रेडदर ६ दशमलव ६२ प्रतिशत, तरलता अनुपात २६ दशमलव ५४ प्रतिशत, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ७७७ दशमलव ५० पैसा रहेको छ ।
निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाहमा बैङ्कले प्रगति गरे पनि पूँजी वृद्धि र खुद आम्दानीमा आएको गिरावटले गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन, जसले गर्दा आउँदा वर्षमा लाभांशमा कमी आउने देखिन्छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्क घट्दो प्रवृत्तिमा
प्रतिरोध २ : ३२१ । प्रतिरोध १ : ३०० । हालको अन्तिम मूल्य : २८० । टेवा १ : २७० । टेवा २ : २६०
३ जुलाई, २०१८ सम्मको दैनिक मैनबत्ती चार्टको आधारमा यो कम्पनीको अन्तिम कारोबार मूल्य २ सय ८० मा रहेको छ । अघिल्लो दिनको कारोबार पनि यही मूल्यमा बन्द भएको थियो । यो दिन २ सय ५९ कित्ताको कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनभन्दा ८४ कित्ताले कम हो ।
चार्टमा देखिएबमोजिम ६ सातादेखि मूल्यको माथिल्लो र तल्लो बिन्दु घटिरहेकाले बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ ।
एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज (ईएमए) : ६ र २१ दिनको ईएमएहरूभन्दा मूल्य प्रवृत्ति तल रहेकाले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति बढी रहेको र बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) : १४ दिनको आरएसआई ४० अङ्कमा रहेको र यसको प्रवृत्तिले बजार सकारात्मक भइहालेको सङ्केत हालसम्म गरेको देखिँदैन ।
स्टोकाष्टिक अक्सिलेटर : यो सूचकले बजारमा क्रेताको चाप बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
मैनबत्ती : अन्तिम दिनको मैनबत्तीले चार मूल्यको डोजी आकृति बनाएको छ । यसले यो दिन थोरै सङ्ख्यामा कारोबार भएको सङ्केत गर्दछ ।
समग्रमा बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहे पनि यदि मूल्य ३ सयभन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार केही सकारात्मक हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र अर्को तत्कालीन प्रतिरोध ३ सय २१ मा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, तत्कालीन टेवा २ सय ७० मा रहेको देखिन्छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २ मङ्सिर २०७५)
२ मंसिर २०७५, आईतवार ०७:४४
मितेरी डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर खरीद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हेरौ आर्थिक र प्राविधिक विश्लेषण :
२० भाद्र २०७५, बुधबार १८:२५